अगस्ट 6, 2019 अगस्ट 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments निधन, सुषमा स्वराज
एजेन्सी, साउन २१ । पूर्व भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजको ६७ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । एक्कासी हर्ट एट्याक भएको शंका भएपछि दिल्लीको एम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । भारतीय न्युज च्यानल इण्डिया न्युजका अनुसार उनको कार्डियाक एरेष्ट भएको जानकारी आएको छ ।
प्राप्त समाचारमा अनुसार उनको उपचारकै क्रममा उक्त अस्पतालमै निधन भएको हो । उनको सन् २०१६ को डिसेम्बरमा मृगौला प्रत्यारोपण समेत गरिएको थियो । स्वास्थ्यकै कारण उनी गत लोकसभा निर्वाचनमा समेत प्रत्यक्ष उम्मेदवारको रुपमा सहभागी भएकी थिइनन् ।
उनको निधन भएलगत्तै एम्स अस्पतालमा भारतीय नेता र कार्यकर्ताहरुको भीड बढेको छ । अस्पतालमा भारतीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्षबर्धन लगायतका नेताहरु पुगेका छन् ।
← जनमत सर्वेक्षण – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्कुल विभाग प्रमुख हुन योग्य नेता को होला ?
होम्योपैथीक औषधि थुजाबारे मेरो अनुभव →
जान्नुहोस् ! नसा च्यापिने समस्याको कारण, लक्षण र उपचार